SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Chokwadi ndeichi: Anenge akakushungurudza ndiye anenge aine mhosva. Bhaibheri rinoti: “Zvakaipa zvomunhu akaipa [anenge akushungurudza] zvichava paari.”—Ezekieri 18:20.
Kuudza mumwe munhu mukuru waunovimba naye kunogona kuita kuti unzwe zviri nani. Bhaibheri rinoti: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.”—Zvirevo 17:17.
Akazviona paakatanga kuita ushamwari neimwe mhuri yechiKristu ine tsika dzakanaka, uye maonero ake akabva achinja. Anoti, “Zvaiitwa nomurume wacho zvairatidza kuti havasi varume vose vanoshungurudza vanhukadzi. Murume wacho aibata zvakanaka mudzimai wake, uye izvozvo ndizvo zvinodiwa naMwari.” *—VaEfeso 5:28, 29.
^ ndima 27 Kana uchinetseka nedambudziko rakadai serokudya, kuora mwoyo (depression), kuzvicheka-cheka, kushandisa zvinodhaka, kushaya hope, kana kuti kuda kuzviuraya, kungava kuchenjera kuti utsvage rubatsiro kuna chiremba.
Zvinhu 3 zvinogona kukubatsira kuti usashungurudzwa panyaya dzepabonde.